The PHANTOM maamuuska cusub hillaac Network tartami doona - Blockchain News
The PHANTOM maamuuska cusub hillaac Network tartami doona
The abuuray ee Specter hab maamuuska iyo Ruuxa Jonathan Sompolinski iyo Aviv Sohar ku tilmaamay hab maamuuska cusub oo a document la daabacay Isbuucaan. maamuuska PHANTOM The ballan qaaday xaqiijinta lagu kalsoonaan karo macaamil “at bandwidth network kasta”, oo ay ku jiraan heshiisyada smart. horumarka cusub ee ku salaysan yahay xalka hore ka amarka la mid ah, Specter, taas oo ka block-dhismeedka dhaqanka ee Seeraar iyo wasaaradaha iyo isticmaalaa more scalable “faray garaafyada block acyclic” (blockDAG). Cilmi sharaxaad ka technology sida “guud ee silsiladda Satoshi ah, kaas oo ku habboon for nidaam blocks degdeg ah ama wayn.”
Si ka duwan xal offline sida Network hillaac ah, marka macaamil ganacsi lagu sameeyo on shabakad add-on an, Phantom bixisaa xal macmiilka ku salaysan in kuu ogolaanayaa inaad inuu ka tago dhammaan xogta transactional on blockroom ah.
Sida laga soo xigtay qorayaasha, feature ugu muhiimsan ee lagu garan PHANTOM waa in ay suurto gal ka dhigaysa gagadoonka toosan ee blocks, oo Specter uma oggolaanin. Tan awgeed, ayuu adeegsanayaa “geynta hunguri” on boosteejo blockDAG iyo kala blocks ee ay “daacad” qanjidhada ka “non-iskaashi” qanjidhada in laga daayo maamuuska macdanta. Sida ku dhiirigelinayaan in uu qoro, farqiga this dhan ogolaanaya “qanjidhada daacad ah” in ay gaadhaan heshiis ah. Xalinta dhibaatada xigsiin toosan ogolaanaya PHANTOM in ay qaaddo xisaab kasta oo, oo ay ku jiraan heshiisyada smart.
Sompolinski iyo Sohar aqoonsadaan in aawadood xigsiin toosan, PHANTOM ku allabaryi heerka xaqiijinta macaamil, taas oo ahayd sare ee maamuuska hore Specter. Laakiin cilmi u socdaan si ay u xaliyaan dhibaatadan in shaqada mustaqbalka.
Sharci-dajiyayaasha California soo bandhigay sharci cusub oo ku saabsan Seeraar iyo Blockchain
Sharciga gobolka California ...
Tngem, har crypto a ...
Post Previous:ETF Blockchain ugu horeysay Kanada ayaa ansixiyay nidaamiyo
Post Next:Litecoin waa